Kungani Abathengisi Bengagijimeli kuJaiku? | Martech Zone
Kungani Abathengisi Bengagijimeli kuJaiku?
NgoMgqibelo, ngoMeyi 19, 2007 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Uma ungezwanga nge-blogging encane, ungavakashela isiza sami bese ubheka eceleni kwami ​​lapho kuthiwa, "UDoug kuJaiku". I-Micro-blogging imane ukuthumela isitatimende esifushane sentshisekelo kanye / noma indawo yakho. Abadlali ababili abakhulu emakethe babonakala bekhona Twitter noJaiku. Kunokwehluka okucashile kulezi zinsizakalo ezimbili, kepha ngingumlandeli kaJaiku ngenxa yamandla ayo wokuhlanganisa. Ngisanda kukubeka lokhu emsebenzini nge-WordPress Plugin yami yeJaiku esanda kudlulisa ukulanda okungu-500 namhlanje ekuseni!
Okungimangazile ngempela nge-Twitter, futhi ikakhulukazi, ukutholwa kukaJaiku ukuthi Abathengisi abakabambi okwamanje. Kuyisimungulu ngokwethembeka uma ungibuza, uma bengingumthengisi, ngabe empeleni ngisebenzisa lobu buchwepheshe. Woot ibiyisayithi eliphumelele ngendlela emangalisayo, enikeza isivumelwano esisodwa ngosuku. IJungle Crazy kungenye indawo ebonakala inemilenze, ihlinzeka nge- RSS ongabhalisela kuyo futhi uthole amadili amahle kakhulu. Amahlebezi anakho lokho IDelta Airlines ihlola iTwitter, kepha ekubukeni ikhasi labo - imiphumela ibukeka ingenamsebenzi.
Ukube bengiyinkampani yezindiza, ngabe ngenza okuzenzakalelayo ukuthunyelwa kokukhethekile kumuntu ngamunye, okuhlobene nendawo, amaJaiku Feeds. Cabanga i-Indianapolis-UA.jaiku.com lapho bengingabhalisa khona futhi ngibone izipesheli zakamuva zivela kumfundi wami wokuphakelayo. Noma mhlawumbe junglecrazy.jaiku.com noma ngisho ne-oot.jaiku.com. Ukuphi i-dell.jaiku.com noma i-sony.jaiku.com? Sawubona? Yini eniyenzayo nina beMakethe laphaya? Leli yithuba elihle lokusebenzisa isu elisha futhi nonke nilale esondweni!
Okunye ukusetshenziswa okwengeziwe ngaphandle kokumaketha:
Ukuqapha - Cabanga ukuthi ungumhlinzeki wokusingathwa futhi ufuna ukuthumela okuthunyelwe kwemininingwane ngokuvalwa kwesistimu noma ukugcinwa kwayo. Kungani ungabi ne-jumpline.jaiku.com noma i-dreamhost.jaiku.com lapho i-Dreamhost noma i-Jumpline ibamba khona iphakela isimo sayo sakamuva sohlelo? Ingxenye emnandi yalokhu ukuthi iJaiku isingathwa kwenye indawo… ngakho-ke isimo singahlala siphume lapho.
Izinga Lokusongela Ukuphepha Kwasekhaya kuJaiku
Izindaba zesitoko kuJaiku
Izexwayiso zeTornado kuJaiku
Baphi bonke abantu? Vuka! Ingabe unayo eminye imibono?
May 19, 2007 ku-3: 16 PM
Ngabe abantu bayayifuna ngempela i-Woot.Jaiku.com? Ungasivele uthole okuphakelayo kusayithi labo. Doug, angicabangi ukuthi kulula njengokuthola enye indlela yokukhuthaza umkhiqizo / insizakalo yakho kubantu abaningi. Umqondo we-jumpline noma enye inkampani yokubamba umnandi, kepha lokho ngeke kusebenze kuwo wonke umuntu.
IDrayivu kaFox isivele isebenzisa iTwiiter futhi lokho kuyasebenza. Bayisebenzisa njengendlela yokwakha umphakathi ozungeze umbukiso, kodwa okubaluleke kakhulu, kulabo abangena ezimotweni. Ngicabanga ukuthi kunoma ngubani kwezokumaketha ofuna ukusebenzisa i-Twitter noma iJaiku, kufanele ngabe uzama ukukhipha umphakathi omncane hhayi nje ukuphonsa imikhiqizo yakhe ngokungenamahloni. Kepha lokho ama-2cents ami.
May 19, 2007 ku-10: 15 PM
Ngiyavuma ukuthi idinga ukuba yingxenye yecebo eliphelele. Ngimangazwa nje ukuthi ubuchwepheshe buhlale ngaphandle isikhashana, buthole ukunakwa okuningi, kepha abathengisi bebengasebenzisi ngobuhlakani. Ngiyikholwa 'leQiniso Lokumaketha Elihlanganisiwe' - futhi lesi ngesinye nje isiqeshana esingezwe kuphazili!
Ngokuqondene neWoot, ngicabanga ngokuphelele ukuthi kungangqongqoza! Eqinisweni, ukube bengiyi-Twitter noma uJaiku, bengizama ukuthola okuthile okuzohamba nabo njengamanje!
May 20, 2007 ku-9: 15 AM
Nginawe Douglas. Ngakusho lokhu kubhulogi yami isikhashana emuva, yize ngangikhuluma ikakhulukazi nge-Twitter ngaleso sikhathi.
Ama-alpha geek afana nawe nami asebenzisa ubuchwepheshe obusha njenge-jaiku ne-twitter ngokushesha futhi ngokushesha abone amathuba. Ngeshwa, sihlala onqenqemeni, futhi kuthatha umhlaba wonke isikhashana ukuthola lokho.
Heck, izinkampani manje sezikuqonda ukubaluleka kwama-blogs!
May 20, 2007 ku-7: 59 PM
Ngiyeka ukuzenzela imali ngesonto elizayo bese ngiqala enkampanini yezikhangiso. Umsebenzi wami ukuhlala emaphethelweni futhi ngilethe izinto ezifana ne-twitter / jaiku etafuleni lenkampani. Ngiyethemba i-alpha geek cred yami ithola i-ejensi yesikhangiso ukuthi yamukele lezi zitayela / ubuchwepheshe obusezingeni eliphezulu ngokushesha. Ngeke kube lula, kepha kungenziwa.
May 20, 2007 ku-9: 45 PM
Sikufisela inhlanhla, Duane! Ukuqala okusha kuhlala kujabulisa.
May 21, 2007 ku-10: 04 AM
Ngiyabonga uDoug. Ngijabule kakhulu njengoba sengizohlala futhi ngisebenze edolobheni manje.
May 21, 2007 ku-10: 50 AM
Sawubona Doug - okuthunyelwe okuhle okuvule amehlo ami kakhulu ekubonakaleni kwe-Twitter. Ngizovuma ukuthi ngashesha ukukuhlulela ekuqaleni njengokuchitha isikhathi ngobuwula… okuthunyelwe kwakho emandleni okusebenzisa ama-micro-blogs ngokubuka kokukhangisa kuyabonakala… usushintshe umbono wami futhi ngizozama nge-Twitter noJaiku njengomphumela.
Bengifuna futhi ukukubonga ngesixhumanisi okuthunyelwe okumbalwa emuva - bengiphakathi kwebhulogi lokudlulela kwiWordPress yingakho angiphendulanga ngokushesha. Uma unethuba, hlola ibhulogi yami ebuyekeziwe ku: http://www.smallbusinessmavericks.com/internetmarketing - Ngingathanda ukuzwa ukuthi ucabangani. (Ungabona futhi okuthunyelwe kwanamuhla lapho ngixhuma khona kubhulogi yakho nalokhu okuthunyelwe kuJaiku ikakhulukazi).
Siyabonga ngebhulogi enhle - qhubeka nokuqukethwe okuhle!
May 21, 2007 ku-12: 33 PM
Ngithanda ukubukeka okusha! Ngakhe isiza sami kunetimu efanayo ezenzakalelayo (uma ungeke usho). Ngiyabonga kakhulu ngamazwi anomusa!
May 21, 2007 ku-11: 29 AM
Kade sizama ukuthola ukuthi singayisebenzisa kanjani i-Twitter ukumaketha iqembu le-baseball inkampani yethu elixhasayo (www.unitedlinen.com) kanye nokumaketha umqhudelwano we-Baseball oqanjwe ngegama lethu. Sicabanga ngokuthumela izikolo zesikhathi sangempela ekugcineni kwe-inning ngayinye phakathi kwetorunament yezinsuku ezi-5 kanye nokuthumela izikolo zethimba le-baseball kuyo yonke inkathi yabo.
Sizama ukuthola ukuthi singabatshela kanjani abantu ukuthi bangafika kanjani ku-twitter nokuthi yini okumele bayenze ukuze babe ngabalandeli beqembu nabomqhudelwano. Senze igama lomsebenzisi lama-ULBraves ku-Twitter, kepha lokho kufinyelela lapho sinakho. Siyazama…
May 21, 2007 ku-12: 39 PM
Yindlela enhle yokuyisebenzisa! Ungakhangisa ngokuphakelayo kwakho kwe-Twitter ne-URL futhi uphinde uthumele lezo zikolo ekhasini lakho lasekhaya usebenzisa i-API yazo ngesikhathi sangempela! Ngazise uma udinga isandla - lokho kungaba yisilingo esihle!
May 21, 2007 ku-3: 14 PM
Ngabe uWoot ufunda ibhulogi yami?
May 22, 2007 ku-12: 12 AM
Njengokuthunyelwe okuningi mayelana namandla amahle wokumaketha we-Twitter et al, lokhu kwehluleka ukuza nokuningi okuwusizo ukukwenza nakho okungenziwa kalula - futhi okungafinyeleli kubantu abaningi - neminye imidiya.
Bangaki abathengisi umuntu ojwayelekile afuna ukubathumela ama-tweets kuselula yabo? Omunye wabaphawulayo empeleni ukhomba umuntu owenza okuthile okunengqondo nge-Twitter - eyisebenzisa njengethuluzi lokwakha umphakathi - kepha lokho kungumsebenzi onzima futhi kudinga ubuciko nokucabanga okuthile. Ngenkathi ingqikithi yokuthunyelwe kwakho, nezibonelo zakho, kuzwakala ngathi “hey, asiphonse konke kuma-microblogging platforms sibone ukuthi yini okunamathela!” indlela.
Ekugcineni, kunesizathu sokuthi abathengisi abaningi abakagijimi kuJaiku naku-Twitter: bafuna ukukhuluma namakhasimende abo, iningi labo elingasebenzisi lezi zinto. Akekho umuntu othutheleka kubuchwepheshe iningi lamakhasimende abo angalisebenzisi futhi alibonakali linentshisekelo kulo.
May 27, 2007 ku-12: 31 AM
Inothi elilodwa… i-woot ibheka lobu buchwepheshe!
Aug 7, 2007 ngo-4: 40 PM
Umbuzo unethemba lokuthi ungaphendula noma ungiqondise endaweni efanele. Nginewebhusayithi yentsha yohlelo lwasekhaya lwe-afterschool engifuna ukulisebenzisa ku-twitter.
1. Sinekhasi “elibukhoma” ngethemba lokuthi singaba nabafundi abaningi abalithumela imiyalezo bese lingafakwa esikrinini nge-projektha.
Ngingathanda ukwazi ukusebenzisa lolu hlelo olufanayo ekwenzeni izingqungquthela lapho abafundi / abantu bekwazi khona ukufundisa imicabango noma imibono yabo kwi-akhawunti ye-twitter futhi njengoba kushiwo ngaphambili, bekuzokhonjwa odongeni ukuze wonke umuntu abone bukhoma. Ngazise uma uneminye imibono.
Aug 7, 2007 ngo-7: 19 PM
Lokhu kungenziwa kalula. Nginekhodi eyisampula ongaqala ngayo.
Ngingavele ngenze isiteshi seJaiku bese ungamema bonke abafundi bakho kuleso siteshi. Konke abakuthumelayo kungaboniswa - kungaba ngokuthola iSiteshi noma ngokubonisa okuphakelayo kwe-RSS!